Hormuud Foundation oo lacag u qaybisay boqollaal Qoys oo barakacayaal ah |
Hormuud Foundation oo lacag u qaybisay boqollaal Qoys oo barakacayaal ah
order Intagra online cheap, generic zithromax. Hay’adda Hormuud Foundation ayaa maanta deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho deeq lacageed ugu qaybisay boqollaal qoys oo kasoo barakacay deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose.
Guddoomiyaha Hormuud Foundation, C/llaahi Nuur Cismaan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in qoysaska barakacayaasha ah ay badankood yihiin kuwii kasoo barakacay degmada Qoryooley iyo tuulooyinka hoos-taga sida Farxaano iyo meelo kale ayna heystaan duruufo dhinaca nolosha ah.
“Haddii aan nahay Hormuud Foundation horay ayaan u nimid goobtan si aan u qiimeyno xaaladda ay dadkan ku nool yihiin iyo baahida ay qabaan annagoo mar walba u taagan inaan dadka Soomaaliyed la qaybsano marxalada iyo culeysyada haysta, waxaan maanta halkaan u joognaa inaan caawino ku dhawaad 300-qoys oo dadkaas ka mid ah,” ayuu yiri guddoomiyaha.
Sidoo kale, C/llaahi Nuur ayaa xusay inay doorteen qoysaskaas inay u qaybiyaan lacago caddaan ah si baahiyaha kala duwan ee ay qabaan ay ugu maareeyaan, isagoo intaas ku daray in qoyskiiba ay gaarsiiyeen $100 (Boqol dollar) oo u dhiganta 2-milyan oo shillinka Soomaaliga ah.
“Sababta aan u dooranay inaan lacagta siinno waxaa weeye, qofku haddii uu lacag uu haysto wuxuu awood u leeyahay inuu wuxuu doono ku iibsado, dadkana waxaa heysta duruufo kala duwan deegaanku waa ku adag yahay, biil la’aan iyo raashiin xumo,” ayuu C/llaahi Nuur hadalkiisa ku daray.
Wuxuu intaa ku daray in barakacu uusan ku ekeyn deegaankan oo kaliya, balse ay jiraan barakacayaal kale oo ku sugan deegaanno ka tirsan gobolka Sh/Hoose waxaana inoo qorsheysan ayuu yiri inaan gaarno deegaannadaas oo ay ka mid yihiin: Shalambood, Marka iyo meelo kale.
Guddoomiyaha Hormuud Foundation ayaa dhinaca kale sheegay in todobaadyadii lasoo dhaafay ay biyo dhaamin ka sameeyeen deegaanno ka tirsan Hiiraan, Gal-gaduud iyo Mudug oo haraad xooggan uu ka jiray, isagoo sidoo kale xusay inay Hormuud Foundation horey gurmad ballaaran uga fidisay dadkii ay fatahaaduhu ku saameeyeen gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan nawaaxiga magaalada Jowhar.
“Hormuud ma ahan hay’ad kheyri ah waa shirkad ganacsi, ujeeddada aan kaalmooyinka iyo mashaariicda ugu sameyneyno dadka dhibaateysana waxay tahay in faa’iidada shirkaddu hesho qayb ka mid ay dib ugu celiso bulshada gaar ahaan kuwa dhibaateysan,” ayuu yiri C/llaahi Nuur oo intaa ku daray inay sii wadi doonaan kaalmada ay la garab-taagan yihiin shacabka xilli kasta iyo meel kasta.
Qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ah ee ka faa’iideystay kaalmadan oo saxaafadda la hadlay ayaa shirkada Hormuud uga mahad-celiyay deeqda ay soo gaarsiisay oo ay sheegeen inay kusoo aadday xili ay aad ugu baahnaayeen ayna haystaan duruufo kala duwan oo dhinaca nolosha ah, waxaana wejiyadooda ka muuqatay dadkaas farxad markii lacagahaas loo qaybiyay.
– See more at: http://hiiraan.com/news/2014/May/wararka_maanta10-46515.htm#sthash.Hq9gF23D.dpuf